Ngemva kokucabangisisa wafinyelela esiphethweni ukuthi ukuze kwakhiwe imisebenzi yokuziphilisa emihle, udinga ukuthenga idiploma obalulekile wemfundo ephakeme? Kuhle kakhulu! Inketho engcono kungaba ukuthenga diploma imfundo ephakeme ku-intanethi. Bahlushwe umbuzo: kanjani uyithenga? Esikhathini sethu akuyona inkinga. Inthanethi agcwele iziphakamiso ukudayiswa amadokhumenti ku iziqu. Moscow, yebo, iyathinteka.
Okudingekayo ukuthenga diploma lwemfundo ephakeme - ukufinyelela ku-intanethi, ethile imali. Kuyi-Internet, ufaka ku search for "ukuthenga diploma yemfundo ephakeme e Moscow," ukukhetha inkampani efanelekayo, ingakhipha umyalelo futhi uthole ukuthi unakekelwa ngesisa "uqweqwe" ezinsukwini ezimbalwa nje. Lezi zinkampani ikhwalithi eliphezulu, ukusetshenziswa amafomu kwemboni, ligcwaliswe kahle, ubuqobelo be-izitembu kanye ahlanganisiwe. Kulokhu, uzothola amathuba ubumfihlo kanye umsebenzi ngokuphelele.
Ezinye izinkampani beqiniseka e izinga diploma abo imfundo ephakeme angadingi iyiphi inkokhelo, futhi unikeze imbuyiselo kungakapheli inyanga uma ikhasimende onganelisekile idokhumenti.
Akubalulekile lapho ekhetha inkampani oda diploma ukuba banake amanani aphansi. Mhlawumbe, kulokhu uzothola yekhwalithi ephansi iphepha noma dokhumenti ligcwaliswe ngokungalungile noma idiploma yakha ngeke eyomphakathi efektri "Gosznak". Izinketho eqolo futhi kuwufanele neze ikhumbula, njengoba ezibizayo - akusho izinga. Nakani sokwenyusa amanani ingxenye, futhi lapho isivele uholwe Izibuyekezo ku-intanethi nokuhlangenwe nakho komsebenzi (ezinye izinkampani kulo msebenzi emakethe iminyaka 15-20).
Yenza okukhethayo - ukuthenga!
Ngemva kokuthola iziqu zaseyunivesithi, uyoba nethuba sengathi oyisazi sangempela, futhi hhayi nje ukusebenza nge nengcebo enkulu elwati nemakhono!
Polymerase chain reaction futhi iyafika nobubanzi
National Research Irkutsk Technical University: ukubuyekezwa, amandla
Indlela ukupheka Batter pizza
Yini eyosisiza umkhuhlane: amafutha abalulekile futhi ezahlukeneyo zalo
Enkulu esetshenziswa izivakashi e Novomikhailovsky kanye nencazelo yabo
Blender-ngesitimu. Izici kudivayisi
Ukulungisa "Karcher" ngezandla zakhe. Ukulungisa ephezulu ingcindezi hose, ephezulu ingcindezi car wash, minimoek, igwebu Imibhobho esemzimbeni, futha "Karcher" ngezandla zakhe